स्वराजको नेपाल भ्रमणः किन उठाएनन् नेताहरुले छपकैयामा सीमा मिचिएको कुरा ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more स्वराजको नेपाल भ्रमणः किन उठाएनन् नेताहरुले छपकैयामा सीमा मिचिएको कुरा ?
स्वराजको नेपाल भ्रमणः किन उठाएनन् नेताहरुले छपकैयामा सीमा मिचिएको कुरा ?
माघ १९ गते, २०७४ - १५:०९
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज दूईदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएकी छिन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिशेष दुतका रुपमा नेपाल आएकी स्वराज राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग रानीतिक भेटवार्ता सकेर स्वदेश फर्किएकी हुन् ।
विशेष विमानबाट बिहिबार अपरान्ह नेपाल आएकी स्वराजले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगबाट सुरु गरेको भेटवार्ता मधेशी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपतिहुँदै प्रधाननमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर आफ्नो भ्रमण सकिन् । नितान्त राजनीतिक भेटकालागि मात्र अकास्मात नेपाल आएकी स्वराजसँगको भेटमा नेपाल–भारत हितबारे छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् । नेपालको समग्र हितबारे छलफल भएको नेताहरुले बताए पनि हालै नेपाल–भारतबिच देखिएको सीमा विवादबारे नेताहरु एक शव्द बोलेनन् ।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका– १ छपकैयामा नेपाल र भारत सीमामा केहि समयदेखि विवाद सुरु भएकोबारे सबै नेताहरु अवगत भएर पनि सो विषयमा नबोलेका हुन् । नेताहरुसँग स्वराजले ‘वान टु वान’ भेटवार्ता गर्दा भारतले ५० बिगाहाभन्दा बढी नेपाली जग्गा मिचेकोबारे कसैबाट कुनै कुरा उठेन । अरु समयमा राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाउने नेताहरु परेका बखत भारत सामु मुख खोल्न नसक्नुले नेपाली नेताहरुलाई भारतबाट काति ‘आशिर्वाद’ प्राप्त छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
स्वराजले नेपाल आएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट राजनीतिक भेटवार्ता शुरु गरेकी थिइन् । बिहीबार साँझ एमालेले उनलाई काठमाडौंको होटल सोल्टीमा रात्रीभोज समेत दियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वराजसँग गोप्य छलफल गरे । एमालेका अन्य नेताहरुसँग स्वराजले सामूहिक भेट गरिन् । कुनै समय नेपालको राष्ट्रियता र भारतको बिरोधमा खरो उत्रिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले स्वाराजसँगको भेटवार्तामा सीमा विवादबारे कुरा उठाउनु आवश्यक ठानेन् । ओलीले पाउनै लागेको प्रधानमन्त्री पद खुस्किने त्रासले भारतसामु सीमा विवादको कुरा नउठाएको हुन सक्छ ।
बिहिबार साँझै स्वराजले राजपाका नेताहरुसँग भेट गरिन् । मधेशीदलका नेताहरुले पनि सीमा विदबारे कुरा नउठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले नेपाल र भारतबिच सीमा विवाद नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । उनले नेपाली सञ्चार माध्यमले उचालेको भरमा नेपाली सीमा भारतले मिचेको भन्न नमिल्ने दाबी समेत गरेका थिए ।
नेताहरू सीमा विवादबारे जानाकार हुँदाहुँदै पनि कुरा नउठाउनुले उनीहरु मुलुक भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने पुष्टि हुन्छ । नेताहरुको यो गुपचुप सँगै भारतले छपकैयामा मिचेको ५० बिगाहाभन्दा बढी नेपाली जग्गा नेपालबाट गुम्ने देखिन्छ ।
माघ १९ गते, २०७४ - १५:०९ मा प्रकाशित